Yusuf Garaad: July 2015
GalMudug waxaan ugu hambalyeynayaa wax ka beddelka Dastuurka qodobkiisa ku saabsan soohdimaha Dowlad Goboleedka cusub.
Baarlamaanka GalMudug wuxuu si dastuurka ku qoray in soohdinta woqooyi ee GalMudug ay tahay Puntland. Maaddaama la yaqaan oo ay qoran tahay soohdinta Puntland waxay tallaabadani muujineysaa ka noqoshada qodobkii markii hore tuhunka dhaliyay.
Arrintaas waxaan rajeynayaa in ay dawo u noqotay kala shakiga soo dhex galay beelweynta Soomaaliyeed ee Gobolka Mudug.
Puntland iyo GalMudug waxay u baahan yihiin in ay isla fariistaan oo ay hoos u daaddegaan, iskuna af gartaan sidii ay u wada maamulan lahaayeen Gaalkacyo oo ah caasimadda Gobolka Mudug.
Tallaabada GalMudug ee geesinnimo, waxayna ka tarjumeysaa xaqiiqada degaankaas ka jirta oo markii hore la baal maray.
Ma fiicna in Gobol la kala qeybiyo oo qabiil dartiis loo kala gooyo, laakiin waxay dhaantaa in la is colaadiyo oo la isku mashquulo, halkii la iskaashan lahaa gacmahana la is qabsan lahaa.
Xujada labaad ee hadda hortaalla GalMudug waa in ay xal dastuuri ah u hesho, shuruudda ku qoran Dastuurka Federaalka ee ah in si loo dhiso Dowlad Goboleed loo baahan yahay in ay isku biiraan ugu yaraan laba Gobol.
Posted by Yusuf Garaad at 07:55:00
Warbixin aan 2005 ka qoray Mowduucan
Madaxweynaha Mareykanka, Barak Obama, oo toddobaadkan booqday Nairobi iyo Addis Ababa wuxuu ku boorriyay Dowladaha Kenya iyo Ethiopia dagaalka ay ciidammadoodu kula jiraan Shabaab ee gudaha dalka Soomaaliya.
Taageerada uu muujiyay Madaxweynuhu ma ahayn wax la yaab leh maaddaama sannado badan ay arrintaasi socotay.
Haddii aan xusuustaada dib u celiyo toban sano, Mareykanku wuxuu ka digay oo weliba is hor taagay in dalalka safka hore - waa Ethiopia, Kenya iyo Djibouti ay ka mid noqdaan ciidanka loo dirayo Soomaaliya. Wuxuu ku tilmaamay in ay habboon tahay in ay ka joogaan Soomaaliya, sida aad ka arki karto warbixinta halkan ku lifaaqan.
Mareykanku wixii uu ka digay toban sano ka hor in uu hadda ku boorriyo labada dal ee aan deriska nahay maxaa keenay? Yaase u sabab ah?
Warbixin ay xuquuqdeeda leedahay BBC oo aan 2005 ka qoray mowduucan ayaan halkan ku soo lifaaqay.
Fadlan akhriso ka dibna xusuuso in aad ra'yigaaga halkan ku dhiibato.
Posted by Yusuf Garaad at 09:11:00
Baabuur weyn oo walxaha qarxaa ay ka buuxaan ayaa maanta lagu weeraray Jazeera Palace Hotel, Muqdisho.
Laba ka mid ah shaqaalaha Hoteelka (maamulka makhaayadda iyo mid ka mid ah ilaalada Hoteelka) iyo askari dowladda ah ayaa ku dhintay weerarka.
Sidoo kale dad goobta marayay iyo qaar dibadda joogay oo aan tiradooda la xaqiijin ayaa qaraxa ku dhintay.
Dhammaantood Allah ha u naxariisto, ehelkoodana Samir iyo Imaan ha ka siiyo.
Dhaawac aan tiradiisu sugnayn ayaa jira.
Hal qof oo Shiine ah ayaa isaguna ku dhintay weerarka.
Intaas aan sheegay marka laga reebo, dadka Hotelka deggan iyo inta ka shaqeysa way ka nabad galeen qaraxa, sida uu ii sheegay maamulka Hotel Jazeera.
Qolalka Hoteelka ee aan qaraxu soo gaarin, waxaa qaarkood ka jabay dariishadaha iyo qaarna xataa albaabbada.
Dhowr ruux ayaa dhaawacyo fudud ay ka soo gaareen walxo faniinaya laakiin aan ahayn firirka qaraxa.
Masjid yar oo ku dhex yaal Hotel Jazeera ayaa saqafku ku soo dumay dad salaadda casir ku tukanayay.
Maamulka Hotelku wuxuu kale oo ii sheegay in biyuhu qasabaduhu ay socdaan, korontadu joogto, isla markaasna ay makhaayaddu shaqeyneyso.
Anigu waxaan Hoteelkaa joogay laba weerar oo midkood ahaa sannadka cusub 2014 midna ahaa 2012. Runtii shaqaalaha amniga, shaqaalaha kale ee Hoteelka iyo Maamulkaba waxaan ku arkay dhiirranaan, adkeysi iyo mintidnimo aad u sarreysa.
Waxaan xusuustaa habeenkii 2014 laba baabuur oo malahaa nus saac u dhexeeyay midba mar la ina ku qarxiyay, intii u dhexeysayna rasaas lagu asqeeyay Hoteelka. Waxaa yaab lahayd sida ay ilaaladu isaga caabbisay nimanka duullaanka ah, ugana adkaatay.
Waxaa kale oo aan xusuustaa in daqiiqado ka dib la billaabay nadaafad, cashana la bixinayay. Maalintii xigtay waxaa la dayac tiray dhammaan dariishadihii iyo albaabbaadii burburay ama ay wax gaareen.
Hotel Jazeera waxaa deggan Safaaradaha Shiinaha, Qadar, Masar iyo Kenya.
Posted by Yusuf Garaad at 21:15:00
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa shalay Cadaado uga qeyb galay caleema saarka Cabdikariin Xuseen Guuleed oo bishaan July horraanteedii loo doortay Madaxweynaha GalMudug.
Curinta Galmudug waxay shaki ku abuurtay deriskeeda woqooyi, Puntland, oo sheegtay in aanay go’aankii Cadaado u aqoonsanayn dowlad Goboleed. Puntland waxaa carada ka keenaya in ay GalMudug u aragto in ay sheeganeyso Mudug oo dhan, oo uu ku jiro Mudug dhinaceeda woqooyi oo ka tirsan Puntland. Xeel iyo xoog mid ay noqotabana ay GalMudug damacsan tahay in Gobolku uu gacanteeda soo wada galo.
Waa loo baahan yahay in Dowlad Goboleedku ay xiriir wanaagsan la leedahay Dowladda Federaalka, maanta iyo berriba, laakiin haddana ma ahan in la kala aqoon waayo Xukuumadda Federaalka iyo Dowlad Goboleedka - xag howlwadeen, xag ra'yi, xag dan iyo xag Xarun.
Si kale haddii aan u dhigo, laba kooxood oo ay Geedfadhi u yihiin kooxo diimeed, ganacsato dalka gudihiisa, deriskiisa iyo dibadda fogba fadhiya, Xildhibaanno iyo Wasiirro Federaal ah oo ku kala daaban ayaa doorashada isku herdiyay. Wareeggii kowaadna isku barbardhacay. Doorashadii wey dhammaatay, in hardanka heer Gobol uu intaa ku dhammaado iyo in ay isku aakhiro seegaan, waxaa farsamdeeda laga rabaa kooxda Guuleysatay.
Adiga oo ku mahadsan in aad qormadan wada akhrisay, waxaan kaa codsanayaa in aragtidaada oo oo aan xanaf lahayn aad ku soo bandhigto isla boggan qeybtiisa hoose.
Posted by Yusuf Garaad at 15:01:00
Waxaan Qaranka Djibouti iyo qoyskiisaba uga tacsiyeynayaa geerida Allah ha u naxariistee Rooble Colhaye, Danjiraha Jamhuriyadda Djibouti ee Washington.
Rooble wuxuu ahaa Hormuudka Danjirayaasha fadhiya Washongton, maaddaama uu ahaa kan ugu wakhtiga dheer ee caasimadda Mareykanka Danjire ka ahaa. Wuxuu xilka qabtay 1988 isaga oo haya ayuuna geeriyooday July 2015.
Waxaa kale oo uu Jamhuriyadda Djibouti wakiil uga ahaa Xarunta Qarammada Midoobay ee New York. Isaga oo dalkiisa matalaya wuxuu xubin ka noqday Golaha Ammaanka ee Qarammada Midoobay 1993 - 1994. Muddo bil ahna wuxuu Guddoomiye u noqday Golaha Ammaanka.
Wuxuu ahaa Danjiraha Ma-Degganaha ah ee qaabbilsan Dowladda Canada, xilkaas oo loo magacaabay 1989.
Intaa aan Washington la geyn, Colhaye wuxuu ahaa Danjirihii Djibouti ee furay safaaradda Jamhuriyadda Djibouti ee Nairobi 1985.
Wuxuu marar badan warar hoose iyo wareysiyaba i siiyay, intii aan ka shaqeynayay BBC.
Allh naxariista Janno ha ka waraabiyo, qoyskiisa iyo Madaxda iyo shacabka Djibouti samir iyo iimaan Allah ha ka siiyo.
Posted by Yusuf Garaad at 01:23:00